Haa ga’uu nagaan kiyyaa Qeerroo fi Qarree Shagariif. | QEERROO
Haa ga’uu nagaan kiyyaa Qeerroo fi Qarree Shagariif.
Posted on August 11, 2020 by Qeerroo
Nagaatti ansuun yaada kiyyaa akka armaan gadiitti eegala. Kunis namni yoo gufuu gufatu maal jedha? Natu gufuu nadura jiru dhahee/ rukute/ jedha moo gufuutuu ana dha’ee jedha? Kana kan jedheef Finfinnee keessaatti taksii qabachuuf uummatni hiriira dhabachaa ooluu sodaa irraa kan ka’ee taksiin akka acaqee fe’uu haa jedhuyyuu malee hammayyuu hin foyyofne. Fakkeenyaaf Xafoo haadebabayii, ayaati, arat kiloo kkf bakkaa adda addaa ilaaluu ni danda’ama.
Bakkuma hawasaa kanaatti sochii achuma dhabbatee harkaa isaa lamaan ol kaasuun mallaattoo yoo diddaa mulise. Rakkoo qala’insaa, kenninsa tajajila, biiroookrasii, kkf maaliif akkana ta’aa? Qindeessuu fi foyyeessuun hin danda’amne jechuun dubbachuun gara sochiitti qajeelchuun ni danda’ama.
Abjuu mana amantii keessaa hin duroomta ittiin jedhan dhaga’ee fakkaataa kaleessa Abiin gurgurtaa harka 40 Itiyoo teleekoomii haala duree wixineessaa turee kana dudduba maaltuu kakaase yoo jennee hanqina dinagdee isaa qunnamee irraa waan ka’ee qabeenyaa dhabbataa biyyaa, fedhii fayyadamtoota malee karaa ittiin ofii fi harcaatoota nafxanyaa waliin badhadhuu totolfataa jiraa.
Kanaaf maal furmaatni isaa? Uummatni shagar fi ogeessi dhimmii kun ilaaluu maaf seeratti hin dhiyeesine? Nuu deemii maaf hin jennee? Kanaa fi kanneen inni biroof deebiin ni kennama.